China Mobile Asphalt Batching Station Lby1000 (80t / H) Ndị na-emeputa na ụlọ ọrụ, Ndị na-ebunye ya ihe | Jianeng
Tag Archives: Ekwentị Asphalt Batching Station Lby1000 (80t / H)
Mobile Asphalt Batching Station Lby1000 (80t / H) - Ndị na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, ndị na-eweta China
Osisi bitumen emulsion mepụtara site na ụlọ ọrụ anyị nwere otu isi mmanụ, otu mmiri ọkụ, mmiri mmiri mmiri emulsified mmiri abụọ, otu akpa bitumen, otu akpa bitumen (maka iji ya mee ihe), otu mgbapụta bitumen na-agbazi agba, otu mgba ọkụ emulsion na-agbazi agbapụta. , otu igwe ihe, otu ebe bọmbụ butere bitumen na otu ebe njikwa eletrik. Ihe ndị metụtara mmanụ ọkpọkọ na-ekpo ọkụ, ọkpọkọ mbupụ bitumen, ọkpọkọ nnyefe emulsion. E kewara osisi Bitumen emulsion ...
Sms Polymer gbanwetụrụ bitumen pant nke ụlọ ọrụ anyị na-arụ ọrụ skid agbakwunyere igwe eji ekwu okwu, nke kachasị adaba maka nrụnye na mgbasa. A na-ejikọ tank ahụ na-agwakọta ọnụ na-agba ọsọ ọsọ iji zere ezughị ezu nke sbs na bitumen. Na-enweghị mbuze, enwere ike imepụta ya site na ịka ya mgbe ị na-eri nri. Ejiri obere bitumen SBS polymer gbanwere ụdị abụọ: akpaaka na ọkara na-akpaka. Ngwaọrụ PMB na-akpaghị aka nwere ihe omimi site na ịtụle modul na ...
Igwe osisi bitumen nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara dị mfe iji rụọ ọrụ ma wụnye: A na-ekewa tank ahụ n'ime ụlọ abụọ, akụkụ ahụ dị elu nwere eriri igwe kpo oku, usoro hydraulic na-akpali bọket bitumen otu otu, bitumen na-agbaze site na kpo oku. A na-ete mmanụ ọkụ dị ala ka ọ nọgide na-agbaze bitumen ahụ, emesịa ya na-agbapụta maka iji ya. Enwere ike itinye decanter bitumen n'ime akpa maka njem. Companylọ ọrụ anyị na - arụpụta ngwaọrụ ịgbaze (akpa) ịgbaze, cantilever cran ...
Ihe nchekwa silo nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara na-ekewa n'ụdị nchedo gburugburu na ụdị a na-ahụkarị: Enwere ike ịhazi ya na 80t / h-480t / h asphalt agwakọta osisi, a nwekwara ike ịhazi ụda ya dịka ihe ndị ahịa chọrọ. Olu nke 160 tọn na nke dị n'okpuru nwere ike ịbanye na njem akpa. Companylọ ọrụ anyị emeela ka usoro mmepụta nke nchekwa nchekwa silo dịgide ruo ọtụtụ afọ, na arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya. Gburugburu ebe obibi na-ekpo ọkụ nchekwa nchekwa silo nke ukwuu ...
Mkpuchi Nchekwa Bolt, Small Gold agbaze Ọkụ , bitumen agbaze Equipment , Drumn Melting , Asphalt agbaze Equipment , Mobile Asphalt Batching Station Lby1000 (80t / H) , Ebe Ngwaahịa niile.